यी राशिका व्यक्तिले सुन लगाउँदा मिल्छ लाभ, कुन राशिलाई कुन धातु शुभ ? – Life Nepali
यी राशिका व्यक्तिले सुन लगाउँदा मिल्छ लाभ, कुन राशिलाई कुन धातु शुभ ?
काठमाडौँ। ज्योतिषमा ९ ग्रह बताइएको छ भने सबै ग्रहसँग सम्बन्धीत अगल अलग धातु पनि उल्लेख गरिएको छ। कुण्डलीमा यदी कुनै अग्र अशुभ भएमा उससँग सम्बन्धीत उपाय अप्नाउँदा दो षबाट मुक्ति मिल्ने गर्दछ। ग्रह दो ष हटाउने उपायमध्ये एक उपाय स्वामी ग्रहर मित्र ग्रहसँग सम्बन्धीत धातु आफ्नो साथमा राख्नु हो। धातुको औँठी बनाएर हातको औँलामा लगाउने वा चेन बनाएर घाँटीमा लगाउन सकिन्छ। कुन राशिका व्यक्तिलाई कुन धातु भाग्यशाली हुने गर्दछ भन्ने बारे जान्नुहाेस्ः
फलामः ग्रहका न्यायाधीश शनिदेव फलामका कारक ग्रह हुन्। यो धातु मकर र कुम्भ राशी हुने व्यक्तिका लागि शुभ मानिन्छ। काँसः काँस एक मिश्रित धातु हो। यसलाई बुध ग्रहसँग सम्बन्धीत धातु मानिन्छ। मिथुन र कन्या राशिका व्यक्तिका लागि यो धातु भाग्यशाली मानिन्छ। पितलः पितल धातुसँग सम्बन्धीत ग्रह गुरु हो। जुन व्यक्तिको राशि मेष, कर्कट, सिंह, धनु र मिन हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि पितल निकै शुभ मानिने गरिन्छ।
तामाः यस धातुको कारक ग्रह सूर्य हो। जुन व्यक्तिको राशि मेष, सिंह वा वृश्चिक हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई तामाको धातु लगाउनु फाइदाजनक मानिन्छ। चाँदीः चाँदी धातुका स्वामी चन्द्र हुन्। यो धातु वृष, कर्कट, तुला, वृश्चिक र मिन राशिका लागि शुभ मानिन्छ। सुनः गुरु सुनको कारक ग्रह हो। यो धातु मेष, कर्कट, सिंह, धनु र मिन राशिका लागि शुभ मानिन्छ।
Previous ज’हाँ छोरीका लागि स’म्भो’ग गर्ने प्रेम झु’पडी ब’नाइ दि’न्छन् पि’ताहरु”
Next म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने इमान्दार केटो चाहियो बिश्वास हुनेले, तुरुन्तै सम्पर्क गर्नु
8 mins ago Life Nepali